Ikhabethe le-Treetops-Lovely in World Heritage Wilderness
Le ndawo imayelana nemvelo! Gcoba emibonweni emangalisayo yehlane elihlanzekile. Ikhabethe le-rustic self content linakho konke okudingayo. Okusanda kulungiswa ngezinto ezigaywe kabusha, sisebenzisa futhi sinikezela ngemikhiqizo yemvelo esimeme, okuhlanganisa amathawula emvelo, ilineni kanye nemikhiqizo yokuhlanza.
Ukulala kwabantu abangafika kwabangu-5 ngokunethezeka, okuhlanganisa nombhede wendlovukazi phansi naphezulu, nombhede owodwa phezulu. Dlulela kumalineni ekhwalithi ephezulu aqhubekayo.
Phumula ngokujulile futhi uphumule.
Indawo engcwele yeqiniso. Izungezwe ihlathi. Le khabhini inothando futhi iyimfihlo. Khetha ukuhlala uwedwa okuphelele noma hlehle uye ezinkundleni zethenisi noma ama-BBQ uma usulungele ukuphuma. Isango lokuhamba okumangalisayo nemvelo. Ngena ezindleleni zokuhamba ukusuka emnyango wakho ongemuva.
Ivulekele ukubukwa kwemvelo nokukhanya, isikhala sihlotshiswe kahle futhi sinethezekile.
Izakhiwo zasekhishini ezigcwele, okuhlanganisa ne-BBQ emphemeni zinikeza ukukhululeka nokuphumula ngemva kosuku lokuhlola ihlathi nezimbobo zokubhukuda ezihlanzekile emfuleni oseduze.
I-Treetops ikunikeza ukuhlehla kwamahhala - uma umbono wakho wokuphunyuka kweqiniso kuyi-inthanethi kanye nendawo yamahhala yomakhalekhukhwini lena kuyindawo yakho! Ukufakwa kwefoni ephathekayo kuyalahleka uma ungena epaki futhi ngamabomu ayikho i-wi-fi!
Okokuzijabulisa, kukhona ama-DVD ane-TV/monitor, imidlalo yebhodi nezincwadi. Futhi kwabasebenzayo, kukhona ama-racquets ethenisi namabhola ahlinzekelwe ukusetshenziswa enkundleni yosayizi ogcwele emagcekeni.
4.82(61 okushiwo abanye)
4.82 · 61 okushiwo abanye
Leli khabhinethi libekwe onqenqemeni lweNdawo Enhle kakhulu esohlwini lweNational Park. Njengoba uzungezwe amahlathi ungakwazi ukuhlala lapho ukhona, imvelo iza kuwe namafasitela amakhulu avulekela ezweni lobuhle. Iyindawo eyimfihlo kakhulu kuzo zonke izindawo zokuhlala ezitholakalayo nokho isanikeza ukufinyelela ezikhungweni ezihlanganisa inkundla yethenisi kanye ne-bbq kanye nezindawo zokudlela. Nethezeka futhi wehlise umoya kulesi siqeshana sepharadesi.
Ukujabulela nokweseka imvelo kungamagugu ayisisekelo e-Treetops. Kusetshenziswa imikhiqizo kanye nezinto ezisimeme zemvelo.
Indawo ekahle yokuphumula nokuphumula.
Izivakashi zisebenzisa ngokukhethekile le khabhini engasese.
I-Treetops isendaweni okungeyona indawo yokuhlala eyihlane futhi ayikho ucingo noma i-inthanethi. Siyaqikelela ukuthi sikuthumelele lonke ulwazi oludingayo ngaphambi kokuhlala kwakho futhi siyatholakala ukuze siphendule noma imiphi imibuzo noma sinikeze noma yiluphi ulwazi lwendawo kusengaphambili.
I-Treetops isendaweni okungeyona indawo yokuhlala eyihlane futhi ayikho ucingo noma i-inthanethi. Siyaqikele…